DAAWO SAWIRO:-Dad ku dhintay darbi ku soo dumay magaalada Beledweyne – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDAAWO SAWIRO:-Dad ku dhintay darbi ku soo dumay magaalada Beledweyne
DAAWO SAWIRO:-Dad ku dhintay darbi ku soo dumay magaalada Beledweyne
12/04/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, Apr 12, 2018:- Inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku dhintay todobo kalana waa ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo duumay darbi ku yaala Suuqa xoolaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Suuqan ayaa ku yaalay Xaafada Holwadag ee magaalada Beledweyne,waxaana lagu iibiyaa xoolaha nool ee laga keeno dhulka Miyiga ah.
Qofka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadka rara xoolaha halka kuwa dhaawacmeyna ay iskugu jireen dad xoolo keenay suuqa iyo kuwa ka shaqeeysata Suuqa.
Dadka ku dhaawacmay darbigan ku soo duumay ayaa la dhigay Isbitaalada ku yaala magaalada Beledweyne si loo la tacaalo xaaladooda Caafimaad.
Darbiga soo duumay ayaa la sheegay in dhararkiisa uu yahay labo mitir islamarkana ay hoos fadhiyeen dadkan ku dhaawacmay iyo mid ka ku dhintay,inkastoo laga yaabo in wali dad ku hoos jiraan.
DAAWO SAWIRO:- Ra’iisul wasaare Kheyre iyo Jawaari oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho
Qarax miino oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho